Artificial Topography Muuqaalka - Joornaalka Naqshadeynta
Muuqaalka Qalabka waaweeyn ee loo yaqaan 'Godka' Tani waa mashruucii abaalmarinta lagu guuleystey ee lagu guddoonsiiyay abaalmarinta Grand Prize of Art ee Tartanka Caalamiga ah ee Container. Fikradayda waa inaan qodaa mugga gudaha weelka si loo dhiso meel bannaan oo loo yaqaan 'amorphous' sida god. Waxay ka kooban tahay shey caag ah oo keliya. Qiyaastii 1000 go'yaal oo ka samaysan caag jilicsan oo 10-mm dhumucdiis ayaa loo jaray qaab qadhadh waxaana loo jaray sidii stratum. Kani maahan farshaxan kaliya laakiin sidoo kale alaabada waaweyn. Sababtoo ah qeybaha oo dhami way jilicsan yihiin sida fadhiga, iyo qofka gala booskan wuu nasan karaa isagoo raadinaya meesha ku habboon qaabka jirkiisa.
Magaca mashruuca : Artificial Topography, Magaca naqshadeeyayaasha : Ryumei Fujiki and Yukiko Sato, Magaca macmiilka : .
Muuqaalka Ryumei Fujiki and Yukiko Sato Artificial Topography